अनलाईन सफलता - 60 दोस्रो चिठी -9कार्य चरण! कुनै पनि अनलाइन व्यवसाय स्थापित गर्न
कुनै पनि उत्पादन, सेवा, शौक, व्यापार, संगठन वा बढि बढाउनका साथ अनलाइन सफल गर्नुहोस् पैसा तपाईंको दान वा समुदायको लागि!
यहाँ भिडियोमा हेर्ने9चरणहरू छन्, तिनीहरू नि: शुल्क eCourse मा पनि कवर हुन्छन् तर धेरै बढि विस्तारमा, पूर्ण चरण-चरण निर्देशनहरू, विशेष उपकरणहरू र तपाईंले आवश्यक आवश्यक स्रोतहरू!
1) एक निको विषय चुन्नुहोस
निश्चित गर्नुहोस् कि यसले तपाईंको सशक्तता, बल, जुनून, रुचिहरू सूट गर्दछ र तपाइँलाई यो मनोरञ्जन पाउन सक्दछ!
2) लक्ष्यित ट्राफिक उत्पन्न गर्नुहोस्
तपाईंको आदर्श ट्राफिक मानिसहरू हुनेछन्; तपाईले ढाकिएको विषयमा रुचि राख्नु पर्छ र उनीहरूको आवश्यकता छ जुन अनपेक्षित बनेको छ जुन तपाईले समाधान वा उत्तर प्रदान गर्नुहुनेछ।
3) एउटा इमेल सूची निर्माण गर्नुहोस्
तपाईले छोटो फारम भरेर आफ्नो इमेल सूचीमा सामेल गर्ने व्यक्तिको नाम र ईमेल ठेगाना क्याप्चर गर्ने तरिका चाहिन्छ।
4) उपहार दिनुहोस्
आफ्नो वेबसाइट आगन्तुकहरूलाई उच्च मूल्यको निःशुल्क जानकारीको उपहार प्रदान गर्नुहोस् जुन उनीहरूको इमेल ठेगानाको लागि फर्काउँछ।
5) स्वचालित इमेल
मानिसहरूले तपाईंलाई आफ्नो ईमेल ठेगाना दिएपछि तपाईंलाई एक सम्बन्ध निर्माण गर्ने इमेलहरू प्रदान गर्न प्रणाली चाहिन्छ, कार्य र अतिरिक्त उत्पादन गर्नका लागि तिनीहरूलाई सम्झनुहोस्।
6) बेचन गर्न उत्पादनहरू छनौट गर्नुहोस्
तपाईं आफ्नो उत्पादन वा अन्य मान्छे को बेच्न सक्नुहुन्छ, बस सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू आफ्नो आला विषयसँग मेल खान्छ र सुरु गर्न महँगो छैन।
7) सङ्कलन गर्नुहोस् पैसा अनलाइन
कुराहरू खरिद गर्न र सङ्कलन गर्न PayPal खाता खोल्न र प्रयोग गरेर सुरू गर्नुहोस् पैसा प्रयोग गर्ने उत्पादन प्लेटफार्महरू प्रयोग गर्नुहोस् पैसा तिम्रो लागि।
8) निशुल्क र सशुल्क मार्केटिंग
नि: शुल्क ट्राफिक जेनरेट गर्न धेरै समय लाग्छ त्यसैले वेबसाइट आगन्तुकका केही भुक्तानी स्रोतहरूमा तपाइँको नतिजाको गति बढाउन मिल्ने।
9) सेटअप डोमेन, होस्टिंग र वेबसाइट
नि: शुल्क वेबसाइटहरू सम्भव छन् तर एक प्रभावकारी अनलाइन व्यवसायले आफ्नै डोमेन नामको स्वामित्व राख्दछ र धेरै राम्रा परिणामहरू प्राप्त गर्न एक पेशेवर वेबसाइट स्थापना गरेको छ।
तल दर्ता गरेर कार्य लिनुहोस्!
हामी छैनौं! आफ्नो जानकारी साझा वा बेच्नुहोस् - GDPR, कुकीज र गोपनीयता - नियम र स्थितिहरु
9 अनलाइनको लागि कदम! 60 सेकेण्डमा सफलता - अहिले हेर्नुहोस्!
अहिले नि: शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त गर्नुहोस्!
साइन अप 24 घण्टा /7एक हप्ता दिन र तपाईं तुरुन्तै प्राप्त गर्नुहुनेछ;
तपाइँलाई अनलाइन अप सेट अप गर्न नि: शुल्क निर्देशन
नि: शुल्क eBook (अतिरिक्त सामाग्री संग)
मेरो विशेष उपकरण र संसाधनहरूमा पहुँच गर्नुहोस्
हामी छैनौं! तपाईंको जानकारी साझेदारी गर्नुहोस् वा बेच्नुहोस्
GDPR, कुकीज र गोपनीयता - नियम र स्थितिहरु
हरेक प्रयास कार्ल हेनरी ग्लोबल सा द्वारा बनाईएको छ। हाम्रो उत्पादन र उत्पादनहरूलाई सही रूपमा प्रचार गर्न र उनीहरूको सम्भावनालाई सही रूपमा प्रस्तुत गर्न। यद्यपि अनलाइन मार्केटिङ उद्योग कम छ, जहाँ एक धेरै सानो वित्तीय लगानीको साथ ठूलो आर्थिक सफलता हुन सक्छ, त्यहाँ कुनै पनि ग्यारेन्टी छ कि तपाईं यो वेबसाइट मा प्रविधि र विचारहरु को प्रयोग गरेर कुनै पनि पैसा कमाउनेछन् र डाउनलोडयोग्य कागजातमा। यी सामग्रीमा उदाहरणहरू एक वादा वा आयको ग्यारेन्टीको रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन। कमाउने सम्भावना हाम्रो उत्पादन, विचार र प्रविधि प्रयोग गरेर व्यक्तिमा पूर्णतया निर्भर हुन्छ। हामी "अवसर धनी योजना" को रूप मा यस अवसर को प्रचार नहीं गरिरहेको हो।